टेलिकमिंगका लागि चूहों र कीबोर्डलाई विश्वास गर्नुहोस्, के यो लायक छ? | ग्याजेट समाचार
El telecommuting आज धेरै पेशाहरुमा सामान्य भएको छ, वास्तवमा हामीले यो श्रम संयन्त्रलाई अरु सबै भन्दा माथि प्राथमिकता दिनुपर्दछ जब सम्भव भएसम्म। यद्यपि धेरै कामदारहरू घरमा जागिर स्थापना गर्ने सम्भावनाको सामना गर्न तयार थिएनन्।
कम्प्युटर सहायक उपकरणहरू एक अपरिहार्य अंश भएको छ जब यो हाम्रो कार्यदिवसमा मद्दतको कुरा आउँछ, यही कारणले अक्टुलिडाड ग्याजेटमा हालसालै हामी यस क्षेत्रमा केन्द्रित राम्रो मुट्ठीभर विश्लेषणहरू ल्याइरहेका छौं। हामी तपाईलाई केहि ट्रस्ट किबोर्ड र चूहों को विश्लेषण ल्याउँदछौं ताकि तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि कुन चाहिँले तपाईको आवश्यकतालाई सूट गर्दछ।
1 ODY किबोर्ड र माउस प्याक
2 ओजा वायरलेस माउस
ODY किबोर्ड र माउस प्याक
साधारण चीज भनेको कुञ्जीपाटी र माउस प्याकमा सँधै शर्त लगाउनु हो जुन "हातमा हात" काम गर्दछ र स्वचालित रूपमा समायोजित हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाइँ एकल माउन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ सेटअप घरमा अफिस अटोमेसनका लागि कामको लागि, यी प्याकहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्।
धेरै ब्रान्डहरू जस्तै लोगिटेक, ट्रस्ट वा जीनियसले यस प्रकारको संयोजनको प्रस्ताव गर्दछ कि किबोर्ड र चूहों। हाम्रो सल्लाह यो छ कि टिकाउको लागि सँधै कालो प्लास्टिकले बनेका उत्पादहरूमा जानुहोस् र सकेसम्म हल्का।
यस अवस्थामा हामी ODY ट्रस्ट मोडलमा फोकस गर्छौं, किबोर्ड र माउस प्याकमा मौन प्रणाली विशेष रूपमा टेलिworking्कि .का लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो घरमा हामीलाई थप मौन चाहिन्छ किनकि सामान्य भन्दा धेरै कम्प्रेस्ड स्थानमा हामीले आफ्ना कार्यहरू गर्नुपर्दछ र रूममेट वा परिवारका सदस्यहरूलाई दिक्क पार्नु हुँदैन।
दुबै माउस र किबोर्डमा यस अवस्थामा बटनहरू र मौन झिल्ली कुञ्जी हुन्छन्। हाम्रो परीक्षण पछि हामीले यो भन्नुपर्दछ कि किबोर्ड विशेष गरी शान्त छ, यद्यपि यो गर्न सकिन्छ प्रतिक्रियाको अभावका कारण नियमित प्रयोगकर्ताको लागि दुर्लभ जब हामी तिनीहरूलाई प्रेस गर्दा याद गर्न सक्छौं।
२ keyboard.24,99 युरो मात्र ट्रष्ट किबोर्ड र माउस प्याक खरीद गर्नुहोस्
कुञ्जीपाटी को रूपमा, हामीसँग दुबै माइक्रोसफ्ट अफिस र मल्टिमेडिया व्यवस्थापनको लागि १ pre पूर्व कन्फिगर कुञ्जीहरू छन्। स्पष्ट रूपमा, यो किबोर्ड, टेलि tele्किंगमा केन्द्रित सबै जस्तै, सर्टकट र लकको साथ संख्यात्मक किबोर्ड छ। माथिल्लो दायाँमा हामीसँग तीनवटा एलईडी बत्तीहरू छन् कि प्रासंगिक गतिविधिहरु को संकेत गर्दछ।
किबोर्ड, यसको अंशका लागि, यो फैलिन प्रतिरोधी पनि छ, त्यो हो, हामीले चिन्ता लिनु हुँदैन यदि हामीले त्यसमा एक कप पानी वा कफी छोड्छौं, यद्यपि स्पष्ट कारणहरूले गर्दा हामी यो सुविधा परीक्षण गर्न सक्षम भएका छैनौं।
दुबै किबोर्ड र माउस एउटै USB पोर्ट मार्फत जडित छन्। माउस को मामला मा, यो ठूलो आराम र कम अनियमित स्लाइडिंग को पक्ष मा रबर कोटिंग छ। सूचकको गति प्रबन्ध गर्न माथिल्लो बटन, हो, हामी द्रुत पहुँचको लागि साइड बटनहरू हराउँछौं।
पछाडि, कुञ्जीपाटीमा लिफ्टिंग प्रणाली रहेको छ, तथापि, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईं सँधै हामीसँग अनुभव भएको नाडीमा पीडा हुनबाट बचाउन "फ्ल्याट" मोडमा प्रयोग गर्नुहोस्। अन्यथा, किबोर्डको राम्रो लेआउट हुन्छ जबसम्म तपाई यसको स्पर्श र प्रतिरोधको लागि आदत हुनुहुनेछ।
यो किबोर्ड र माउस ODY ट्रस्ट द्वारा यो दुबै विन्डोज र म्याकोस र क्रोम ओएससँग उपयुक्त छ, त्यसैले सामान्य सर्तहरूमा हामी दिन प्रति दिन प्रयोगमा धेरै कठिनाइहरू हुनेछैनौं। यस उत्पादनको लागि सिफारिस गरिएको मूल्य २..24,99 युरो हो, तपाई यसलाई अमेजनमा उत्तम मूल्यमा किन्न सक्नुहुनेछ यो लिंक।
ओजा वायरलेस माउस
हामी अब माउसको बारेमा कुरा गर्दैछौं, हाम्रो कम्प्युटरको दोस्रो महान नियन्त्रण केन्द्र, यस अवस्थामा मोडेल ओजा de भरोसा स्पष्ट रूपमा हामी यसलाई केही प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबाट अन्य उच्च-अन्तमा चूहोंसँग व्यावहारिक समानता पाउँदछौं, यो त्यस्तो नकारात्मक बिन्दु होइन, विशेष गरी यदि हामीले मूल्यलाई ध्यानमा राख्यौं भने।
यो माउस छ प्लग र खेल र एक USB सिग्नल रिसीभर छ, जो सिद्धांत मा कभर गर्दछ १० मिटर सम्म, केहि चीज जुन हामी मुश्किलले जाँच्न लाग्यौं, किनकि हामी त्यस अवस्थामा पर्दा देख्दैनौं। ब्लुटुथ छैन न त कुनै अन्य प्रकारको वायरलेस टेक्नोलोजी, त्यसैले तपाईं एक USB पोर्ट कब्जा गर्न आवश्यक छ।
योaको माथि छ ब्याट्री सूचक एलईडी जुन रातो पहेलो हुनेछ। माउस प्रवेश गर्दछ "निन्द्रा मोड" ब्याट्री स्वत: बचत गर्न, र यो कुनै पनि बटन थिच्ने वा अचानक आन्दोलन गरेर "उठ्नेछ"। यी सबै बाहेक, हाइलाइट यो छ कि हामी यसमा रिचार्ज योग्य लिथियम ब्याट्री पाउँछौं।
कुञ्जीपाटी र माउस किटको रूपमा जुन हामीले पहिले यसका बारेमा कुरा गरेका थियौं हामी सबै केसहरूमा म्यूट बटनहरू पनि फेला पार्दछौं। यो एल्युमिनियममा केही सानो विवरणको साथ पूर्ण रूपमा प्लास्टिकको बनेको छ, पक्षहरू रब्बरी सिलिकॉनले बनेको छ पक्रिन सुधार गर्नका लागि।
स्पष्ट रूपमा यो उत्पादन गरिएको प्लास्टिकको कारण यो एक हल्का उत्पादन हो, यद्यपि म व्यक्तिगत रूपमा यसको साइड बटनहरू अत्यन्त उपयोगी पाउँदछु, जहाँ हामी "पछाडि" र "अर्को" नेभिगेट गर्न सक्षम हुनेछौं र एक साइड व्हील अधिक आरामका साथ नेभिगेशन गर्न सक्षम हुनेछ। कागजात मार्फत। कुलमा, छ वटा बटन उत्पादकता सुधार गर्न।
हामी यसलाई तीन विभिन्न र colors्गमा किन्न सक्दछौं, निलो, कालो र सेतो। तपाईमले देख्न सक्नुहुने जस्तै, हामीले हाम्रो विश्लेषणमा परीक्षण गरेका एकाई सेतो हो, यद्यपि मैले भन्नु पर्छ कि हरियो निलो सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक देखिन्छ, तथापि, म अवसर लिन्छु कि हामी सँधै कालो रंगमा जानु पर्छ। यदि हामी के खोज्दैछौं भने त्यो स्थायित्व र सफाई हो।
हामीसँग ब्याट्री जीवनको बारेमा निश्चित अनुमान छैन, एक हप्ता भन्दा बढिको परीक्षणको बेला हामीले यसलाई चार्ज गर्नु पर्दैन। कुल वजन १०० ग्राम भन्दा बढि छ, त्यसैले यो आरामदायक छ, र यो दुबै क्रोम ओएस र विन्डोज र म्याकोससँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ।
यस माउसको लागत।। .49,99eयुरो हो, यद्यपि यो हाल छ अमेजनमा यसको कालो एकाईमा केवल। ..39,99 युरो मा प्रस्ताव, जसले २०% छुट छ। तपाईं यसलाई यो लिंकमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ उत्तम मूल्यमा र सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ।
टेलिकमिंगका लागि ट्रस्ट उत्पादनहरूको परीक्षण पछि यो हाम्रो सिफारिशहरू थिए, हामी आशा गर्छौं कि अब तपाईंलाई भेला गर्ने बारेमा स्पष्ट विचार छ। धेरै प्रयास बिना र सापेक्षिक गुणस्तरको उत्पादनको साथ घरमा एउटा काम, तपाई के पर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » टेलिकमिंगका लागि चूहों र कीबोर्डलाई विश्वास गर्नुहोस्, के यो लायक छ?